Xisbigu wuxuu soo bandhigayaa ku dhawaaqida dagaalka Youtube.
Muuqaal laga soo duubay Waaxda Nordigga oo ay ku jiraan baaq dagaal.
Xoghayaha xisbiga siyaasadeed, Laanta Nordic, Krar Al-hamede, wuxuu ku dhawaaqayaa dagaal ka dhan ah Iswiidhan (dagaal sokeeye) haddii xisbiga Sverigedemokraterna xukunka la wareego.
Waaxda Waqooyiga Yurub waxay ku hanjabtay dagaal
Waxaan helay fiidiyowgaan oo loo soo diray Messenger maanta. Ma garanayo sida dhab ahaan loo qaato. Sikastaba xaalku ha ahaadee, xoghayaha xisbiga siyaasadeed, Laanta Nordic, Krar Al-hamede, wuxuu iclaaminayaa dagaal ka dhan ah Iswiidhan (dagaal sokeeye) haddii xisbiga Sverigedemokraterna la wareego xukunka.
Hanjabaadaha uu Krar Al-hamede ku sameeyay fiidiyowga ayaa ah, ugu yaraan, cabsi badan. Haddii xisbigu kaligiis uun ahaanayo, booliska iyo Säpo weli waa inay hanjabaadaha si dhab ah u qaataan.
Waaxda Nordic waxay leedahay degel , sidoo kale waxaa laga heli karaa Facebook iyo Youtube . Waaxda Nordic waa in isla markiiba la xannibaa. Mudo intee le'eg ayay qaadan doontaa ka hor intaysan Facebook iyo Youtube xannibin xisaabaadka? Iyo intee in le'eg ayuu webku sii jiri karaa?
Ku dhawaaqida ereyga erey u hadal
Hoos waxaad ka akhrisan kartaa qoraalka macno ahaan waxa lagu yiri 3 daqiiqo iyo 53 ilbiriqsi oo dherer ah.
Dhamaantiin waad salaaman tihiin kuna soo dhawow fariin. Waa tan oo kale ... Baaqa Dagaal!
Anagu hadaanu nahay waaxda Waqooyiga Yurub, xubno ka mid ah oo jira oo jira, ma muuqdaan, ma doonayaan in la arko. Aniga kaliya ayaa la arki karaa oo aan matali karaa xisbiga waqtigan. Anaguna waxaan ku dhawaaqi doonaa dagaal ka dhan ah dowlada Sweden hadii xisbiga Sverigedemokraterna awood ku yeesho Sweden. Haddii xisbiga Sverigedemokraterna uu noqdo gobolka, waxaan la qaadi doonnaa iska caabin hubeysan oo ka dhan ah gobolka.
Waxaan joognaa Iswiidhan oo dhan. Laga soo bilaabo Haparanda, Piteå, ilaa laga soo gaaro Ystad, Trelleborg, Göteborg iyo Stockholm iyo bartamaha Iswiidhan. Waxaan matalnaa Iswiidhan oo dhan hadda. Waxaan diyaar u nahay sida ugu dhakhsaha badan daqiiqada ay xisbiga Sverigedemokraterna awood ku yeeshaan dalka, waxay noqon doontaa (maqal la'aan) waa la baabi'in doonaa, ka dibna waxaan sidoo kale baabi'in doonaa sharciga Sweden iyo goorta uu bilaabmo dagaal sokeeye.
Waxaan ku dhawaaqi doonaa dagaal waxaanan qaadi doonnaa iska caabin hubeysan oo ka dhan ah gobolka. Ka soo horjeedka gobolka Iswiidhan ama xisbiga Sverigedemokraterna. Waxaan sameyn doonnaa weerarro saber ah, waxaan haysannaa dhammaan qalabkii lagama maarmaanka u ahaa si dhakhso leh ula wareego awoodda Iswiidhan. Sida ugu fudud ee. Waxaan u nimid ...
Xisbiga Sverigedemokraterna waa xisbi dimuqraadi ah. Waxay dulmiyaan dadka laga tirada badan yahay ee Sweden, waxay dulmiyaan soo galootiga, waxay faafiyaan nacaybkooda, waxay kala qaybiyeen Sweden. Waana diidanahay in aan aqbalno dulmiga, nacaybka iyo welwelka ka dhex jira soo galootiga. Hadda taasi waa ku filan tahay. Anaga ... Talaalkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa halkan Skurup oo mamnuucida xijaabku soo gashay. Iyo kan...
Waxaan rabaa inaan dhaho tan. Anigu waxaan ahay wakiil ka socda Waaxda Nordigga oo xubno ayaan ku leenahay. Waxaan leenahay xubno. Waxaan leenahay ciidan ka jira dalka oo dhan sidoo kale annaga, oo aan la gorgortamno oo aan la kaashanno.
Oo annaguna waxaannu leenahay tan: Idinka reer Scaniyaanka ah ee cunsuriyiinta ah, si taxaddar leh u daryeel naftaada nacalad, okay Is ilaali naftaada. Idinka saraakiisha booliska ah ee cunsuriyiinta ah: taxaddar. Idinka ilaalada amniga ee cunsuriyiinta ah: taxaddar. Idinka garsoorayaasha ah, xubnaha guddiga ee ka tirsan xisbiga Sverigedemokraterna: nafsaddaada si fiican u daryeelo. Sababtoo ah ... waxaan la wareegi doonnaa xukunka goor dhow ama goor dambe.
Haddaynu helno awoodda, waxaannu, gelin doonnaa, kuwan oo dhan maxkamadda saari doonnaa. Garsoorayaasha, garsoorayaasha, dhakhaatiirta iyo wixii la mid ah. Kama baxsan doontid gacanteenna. Wixii aad nagu sameysay anaga muhaajiriinta ah lama cafin karo mana tanaasulidoono. Way iska fududdahay.
Isla fariintaas, waxaan rabaa inaan ku idhaahdo ... in Socialdemokraterna ay tahay xisbi fiican aniga, xoghaye ahaan, waxaan diyaar u ahay inaan kala xaajoodo sausages si wax waliba loo saxo. Waxaan diyaar u nahay in aan gorgortanno oo wax saxno markale, laakiin waxaan dalbaneynaa, in aan leenahay dalabyo gaar ah waxaanna u soo bandhigi doonnaa xisbiga Sooshal dimuqraadiga.
Waxaan noqon doonaa wakiilka waanan arki doonaa inta xubnaheena ah ee isa soo taraya oo garabkeyga taagan, laakiin ilaa iyo hada xubnahu way qarsoomeen, ama ma muuqdaan.
Waana sida tan: Tan waxaa loola jeedaa in si dhab ah loo qaato waxaanan diyaar u nahay inaan ku dhawaaqno dagaal ka dhan ah dowladda Sweden haddii xisbiga Sverigedemokraterna awood helo. Isla markaa, tani waxay noqon doontaa xaqiiqo. Sida ugu fudud ee. Dagaal sokeeye ayaa run noqon doona.
Waxaan diidnay in nala dulmo, waxaan diidnaa inaan dareemo walaac, nacayb iyo kala qaybsanaanta bulshada. Intaas ayaa kugu filan. Dhamaadka dooda. Nabad gelyo
Siyaasadda iyo hanjabaaduhu ma badbaadin karaan
Ma aqaan sida ay u daranyihiin tan kor ku xusan, laakiin hal shay waan ogahay: Waxaan ku noolahay maalmaha ugu dambeeya waxaanan ubaahanahay ciise masiix abid abid.
Haddii aadan weli helin Ciise Masiix, waxaan si kal iyo laab ah ugu talinayaa inaad adigu sameysid.
Isaga oo keliya ayaa badbaadin kara oo samatabbixin kara. Siyaasadda, hanjabaadaha, dagaallada iyo dagaalladii sokeeye ma badbaadin karaan - Ciise oo keliya!
Vecka 19, fredag 14 maj 2021 kl. 16:23